5ta lakab ee jawiga, maxay yihiin? maxaa loogu talagalay | Saadaasha Shabakadda
Sidaan ku aragnay qoraal hore, Earth Planet Waxay leedahay lakabyo badan oo gudaha iyo dibaddaba ah waxayna ka kooban tahay afar nidaam hoosaadyo. The lakabyada Dhulka waxay ku jireen nidaamka hoose ee juqraafiga. Dhinaca kale, waxaan haysanay biosphere ah, aaggaas oo ah dhulka ay noloshu ku horumarto. Hydrosphere-ku wuxuu ka mid ahaa dhulka ay biyuhu ka jiraan. Waxaan kaliya haysannaa nidaamka kale ee meeraha, jawiga. Waa maxay lakabyada jawigu? Aan aragno.
Jawigu waa lakabka gaasaska ku xeeran Dhulka oo leh shaqooyin kala duwan. Hawlahaas waxaa ka mid ah xaqiiqda guryeynta xaddiga oksijiin ee lagama maarmaanka u ah nolosha. Hawsha kale ee muhiimka ah ee jawigu u leeyahay noolaha ayaa ah inuu inaga ilaaliyo falaadhaha qorraxda iyo wakiilada dibedda ee ka yimaada hawada sida meteorites-ka yar ama asteriyoodka.
1 Qaab dhismeedka jawiga
2 Waa maxay lakabyada jawigu?
2.1 Meesha loo yaqaan 'Troposphere'
2.3 Meesha sare
3 Taariikhda jawiga
Qaab dhismeedka jawiga
Jawigu wuxuu ka kooban yahay gaasas kala duwan oo uruurinno kala duwan leh. Inta badan wuxuu ka kooban yahay nitrogen (78%), Laakiin nitrogen-kan ayaa ah mid dhexdhexaad ah, taasi waa, waannu neefsannaa laakiin ma dheef-shiidno ama uma adeegsanno wax. Waxa aan u isticmaalno inaan ku noolaano waa ogsijiin laga helay 21%. Dhamaan noolaha ku nool meeraha, marka laga reebo noolaha anaerobic, waxay u baahan yihiin oksijiin si ay ugu noolaadaan. Ugu dambayntii, jawigu wuxuu leeyahay feejignaan aad u hooseysa (1%) gaasaska kale sida uumiga biyaha, argon, iyo kaarboon laba ogsaydhka.
Sida aan ku aragnay maqaalka ku saabsan cadaadiska Hawada, hawadu waa culus tahay, sidaa darteedna waxaa jira hawo badan oo ku jirta lakabyada hoose ee jawiga maxaa yeelay hawada ka sareysa ayaa riixeysa hawada ka hooseysa waana ka cufan tahay dusha sare. Sababtaas awgeed 75% wadarta guud ee jawiga waxay ku taal inta u dhexeysa dhulka dushiisa iyo 11 kiiloomitir ee ugu horreeya joog ahaan. Markaynu koreyno, jawigu wuxuu noqonayaa mid cufan oo dhuuban, hase yeeshe, ma jiraan xariiqyo calaamadeeya lakabyada kala duwan ee jawiga, laakiin inbadan ama kayar halabuurka iyo xaaladaha ayaa isbadalaya. Khadka Karman, oo qiyaastii 100 km sare ah, waxaa loo arkaa dhamaadka jawiga dhulka iyo bilowga booska bannaanka.
Waa maxay lakabyada jawigu?
Sidii aan hore uga faallaynay, markaan kor u soo kacnay, waxaan la kulanaynaa lakabyo kala duwan oo jawigu leeyahay. Mid kasta oo ka kooban, cufnaantiisa iyo shaqadiisa. Jawigu wuxuu leeyahay shan lakab: Meesha loo yaqaan 'troposphere', stratosphere, mesosphere, termosphere iyo exosphere.
Lakabyada jawiga. Source: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
Meesha loo yaqaan 'Troposphere'
Lakabka ugu horreeya ee jawigu waa meesha loo yaqaan 'troposphere' waana ugu dhow dhulka dushiisa oo haddaba, waxay ku jirtaa lakabkaas aan ku nool nahay. Waxay ka fidsan tahay heerka badda illaa sare oo u jirta 10-15 km. Waxay ku taal meesha loo yaqaan 'troposphere' halkaasoo noloshu ku horumarto meeraha. Marka laga gudbo meelaha loo yaqaan 'troposphere' shuruudaha hana u oggolaan horumarka nolosha. Heerkulka iyo cadaadiska cimilada ayaa ku sii yaraanaya dhulka loo yaqaan 'troposphere' maaddaama aan kordhinayno dhererka aan nafteenna ku aragno
Dhacdooyinka saadaasha hawada sida aan ognahay waxay ku dhacaan meelaha loo yaqaan 'troposphere', maaddaama halkaas laga bilaabo daruuraha kama soo baxaan. Dhacdooyinkaas saadaasha hawada waxaa sameeya kuleylka aan dheellitirka lahayn ee qorraxdu u keento gobollada kala duwan ee meeraha. Xaaladdan ayaa keenta qulqulka socodka iyo dabaylaha, taas oo ay weheliso isbeddelo ku yimaadda cadaadiska iyo heerkulka, waxay keenaan duufaanno duufaanno wata. Diyaaraduhu waxay ku duulaan gudaha gudaha halka loo yaqaan 'troposphere' sidaan horeyna u soo sheegnayba, banaanka goobta loo yaqaan 'troposphere' wax daruuro ahi ma samaysmaan, marka ma jiraan wax roobab ama duufaanno wata.
Dhacdooyinka saadaasha hawadu waxay ku dhacaan meelaha loo yaqaan 'troposphere' ee aan ku noolahay. Source: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
Qaybta ugu sarreysa meesha loo yaqaan 'troposphere' waxaan ka helnaa lakab xuduud la yiraahdo cunugga Lakabkaan xadka, heerkulku wuxuu gaaraa qiyamka ugu hooseeya ee xasilloon. Taasi waa sababta saynisyahanno badani ugu yeeraan lakabkan sida Lakabka kuleylka ah Sababtoo ah halkan, uumiga biyaha ku jira berriga ma sii kici karo, maxaa yeelay wuu ku xaniban yahay markuu uumi isu beddelo baraf. Haddii aysan ahayn tropopause, dhulkeennu wuxuu waayi karaa biyaha aan haysanno markay uumi baxaan oo ay u guuraan meel bannaan. Waxaad dhihi kartaa tropopause-ka waa caqabad aan muuqan oo ka dhigeysa xaaladaheena mid deggan isla markaana u oggolaaneysa biyaha inay ku sii jiraan meelaha aan gaari karno.
Ku sii wadida lakabyada jawiga, hadda waxaan helnay stratosphere. Waxaa laga helaa tropopause waxayna fidsan tahay 10-15 km oo dherer ah ilaa 45-50 km. Heerkulka stratosphere wuu ka sareeyaa qaybta sare marka loo eego qaybta hoose maaddaama oo uu sii kordhayo dhererku, waxay nuugaysaa falaadhaha cadceedda oo aad u sarreeya. Taasi waa in la yiraahdo, dabeecadda heerkulka dhererkiisu waa ka soo horjeedka kan ku yaal troposphere. Waxay ku bilaabantaa xasilooni laakiin hooseeya oo kolba jooggoodu sare u kaco, heerkulku wuu kordhaa
Nuugista shucaaca iftiinka waxaa u sabab ah lakabka ozone taas oo udhaxeysa 30 ilaa 40 km. Lakabka ozone waa wax aan ka badnayn aagagga ay ku urursan tahay aaladda loo yaqaan 'ozone stratospheric ozone' ay aad uga sarreyso jawiga intiisa kale. Ozone waa maxay wuxuu inaga ilaaliyaa falaadhaha qorraxda ee waxyeelada lehLaakiin haddii ozone ku dhaco dusha sare ee dhulka, waa wasakh wasakh leh oo hawo-wadaagga ah oo keenta cudurrada maqaarka, neefsashada iyo wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Qaybta 'stratosphere' waxaa si dhib leh looga socdaa jihada toosan ee hawada, laakiin dabaysha jihada jiifka ah ayaa gaari karta had iyo jeer 200 km / saacaddii. Dhibaatada dabayshani leedahay ayaa ah in walax kasta oo gaadha stratosphere ay ku faafto meeraha oo dhan. Tusaale tan waa CFCs. Gaasaskan oo ka kooban koloriin iyo fluorine ayaa burburiya lakabka ozone waxayna ku faafaan meeraha oo dhan sababo la xiriira dabaylo xoog leh oo ka imanaya stratosphere.
Dhamaadka stratosphere waa dhalmada Waa aag jawiga ah halkaasoo uruurinta sare ee ozone dhammaato heerkulkiisuna aad u deggan yahay (ka sarreeya 0 digrii Celsius). Kala-goysyada 'stratopause' waa kan u oggolaada mesosphere-ka.
Waa lakabka jawiga ee fidiya laga bilaabo 50 km ilaa in ka badan ama ka yar 80 km. Dabeecadda heerkulka mesosphere-ka waxay la mid tahay tan troposphere, maaddaama ay ku degayso joog sare. Lakabkan jawiga, in kasta oo uu qabow yahay, awood u leeyahay inuu joojiyo meteorites-ka inta ay ku dhacayaan jawiga ay gubayaan, sidan ayaa looga tagayaa raadadka dabka cirka habeenka.
Meeshu waa lakabka ugu dhuuban ee jawiga, tan iyo kaliya waxaa ku jira 0,1% wadarta guud ee hawo oo dhexdeeda heerkul gaadheysa ilaa -80 digrii ayaa lagu gaari karaa. Falcelinta kiimikada ee muhiimka ahi waxay ka dhacdaa lakabkan iyo cufnaanta hoose ee hawada awgood, buuqyo kala duwan ayaa la sameeyaa kuwaas oo ka caawiya dayax gacmeedyada markay ku soo laabtaan Dhulka, maaddaama ay bilaabayaan inay ogaadaan qaab dhismeedka dabaysha asalka ah oo aan kaliya ahayn bareegga aerodynamic. markabka.
Dhamaadka mesosphere waa mesopause. Waa lakabka xadka ee kala saara mesosphere-ka iyo heerkul-hawleedka. Waxay ku taalaa qiyaastii 85-90 km oo dhexdeeda ah heerkulka waa xasilloon yahay oo aad u hooseeya. Chemiluminescence iyo aeroluminescence reactions ayaa ka dhaca lakabkan.
Waa lakabka ugu ballaaran ee jawiga. Waxay ka fidsan tahay 80-90 km ilaa 640 km. Waqtigan xaadirka ah, ma jiraan wax hawo ah oo haray iyo walxaha ku jira lakabkan waxaa lagu shubayaa shucaaca ultraviolet. Lakabkan ayaa sidoo kale loo yaqaan ionosphere shilalka ionka ka dhex dhaca. Ionosphere saameyn weyn ayey ku leedahay faafinta mowjadaha raadiyaha. Qeyb ka mid ah tamarta uu sii daayo gudbiye ku teedsan ionosphere ayaa waxaa nuugaya hawada ionized ka mid kalena waa la rogay, ama leexsaday, dib ugu laaban dhulka dushiisa.
Heerkulka heerkulku waa mid aad u sarreeya, oo gaadha ilaa kumanaan darajo Celsius. Dhammaan walxaha laga helo heerkulka hawada ayaa si aad ah loogu soo oogay tamar ka timaadda falaadhaha qorraxda. Waxaan sidoo kale ogaaney in gaasaska aan si siman loo kala firdhin sida ku dhacda lakabyadii hore ee jawiga.
Jawiga hawada ayaan ka helnaa magnetosphere. Waa gobolkaas jawiga ah ee dhulka cuf isweydaarsiga dhulku ka ilaaliyo dabaysha qorraxda.
Lakabka ugu dambeeya ee jawigu waa bannaanka. Kani waa lakabka ugaga fog dhulka dushiisa iyo dhererkiisa awgiis, waa midka aan la cayimin sidaa darteed laftiisa looma tixgaliyo lakabka jawiga. In kabadan ama kayar waxay fidisaa inta udhaxeysa 600-800 km oo dherer ah ilaa 9.000-10.000 km. Lakabkan jawigu waa maxay wuxuu kala saaraa meeraha dhulka iyo bannaanka sare dhexdeedana atomku ku baxsado. Waxay ka kooban tahay inta badan hydrogen.
Xaddiga badan ee stardust ayaa ka jira bannaanka hore
Sida aad u jeeddo, ifafaalooyin kala duwan ayaa ku dhaca lakabyada jawigas oo ay leeyihiin shaqooyin kala duwan. Laga soo bilaabo roobka, dabaysha iyo cadaadiska, iyada oo loo marayo lakabka ozone iyo rays ultraviolet, lakab kasta oo jawigu wuxuu leeyahay shaqadiisa ka dhigaysa nolosha meeraha sidaan ognahay.
La jawiga in aan maanta ognahay waligeed sidan ma ahayn. Malaayiin sano ayaa ka soo wareegtay markii meeraha Dunida la aasaasay ilaa maanta, tanina waxay sababtay isbadal ku yimaada cimilada.
Jawiga Dhulka ee ugu horreeyey ee jiray ayaa ka dhashay roobkii ugu weynaa uguna cimri dheeraa taariikhda ee sameeyay badaha. Halabuurka jawiga ka hor nolosha sida aan ognahay inay kacday wuxuu ka koobnaa inta badan methane. Markaa dabadeed, way dhacdaa in ka badan 2.300 bilyan oo sano, noolaha xaaladahan ka badbaaday waxay ahaayeen nooleyaal methanogens iyo anoxic, taasi waa, uma baahnayn oksijiin ay ku noolaadaan. Maanta methanogens waxay ku nool yihiin jiinka harooyinka ama caloosha lo'da halkaasoo aysan oollin oksijiin. Meeraha Dunida wali aad buu u yaraa qorraxduna way sii yaraanaysay, si kastaba ha noqotee, isku-ururinta methane ee jawiga ayaa ahayd ilaa 600 jeer ka badan inta maanta jirta wasakheynta. Taasi waxaa loo tarjumay saameyn koriin xoog leh oo ku filan si loo kordhiyo heerkulka adduunka, maaddaama methane uu haayo kuleyl badan.
Methanogens waxay xukumaysay Dhulka markii halabuurka jawigu ahaa sun. Source: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
Goor dambe, iyadoo badatay cyanobacteria iyo algae, meeraha waxaa ka buuxay ogsijiin wuxuuna bedelay halabuurka jawiga ilaa, inyar uyar, ay noqotay waxa aan maanta haysanno. Thanks to plate tectonics, dib u habeynta qaaradaha waxay gacan ka gaysatay qaybinta kaarboonatka dhammaan qaybaha dhulka. Waana sababtaas sababta jawigu isu beddelay jawi yaraaday una beddelay mid oksayid ah. Isku soo ururinta oksijiinta ayaa muujineysay sarre sare iyo mid hoose ilaa iyo in ka badan ama ka yar ay ku sii jirreyso joogteynta joogtada ah ee 15%.
Jawi hore oo ka kooban methane. Source: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Lakabyada jawiga
Waad salaaman tihiin, haddii heer-kulku gaaro kumanaan darajo C. Sidee ayey suurtagal u tahay in dayax gacmeed uu dhex mari lahaa?
Waa maxay heerkulka heerkul-hawleedku ka dib?
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada
LIONEL VENCE MURGAS dijo
Pedro .. qofna weligiis kuma guuleysan inuu baxo!
wax walba waa sheeko beenta weyn ... daawo fiidiyowyada issimada ama been abuurka oo dhan ..
ama sifiican wali, fiiri sawirada CGI ee dhulka, weligood sawir dhab ah majiro oo qofna weligiis ma arkin dayax gacmeed wareegaya .. aan kuu sheego bro .. waa nala khiyaaneeyey
Ku jawaab LEONEL VENCE MURGAS
«Hawada sare waxaan ka helaynaa magnetosphere. Waa gobolkaas jawiga ah ee dhulka cuf isjiidadka dhulka uu naga difaacayo dabaysha qorraxda. "
Waxaan u maleynayaa in jumladan ay dhigayaan birlab-sooc oo ma ahan dhul cufis-jiid.
Macluumaadka aad ayuu ufiicanyahay aadna waa loo sharaxay… aad ayaad u mahadsantahay… aad iyo aad buu anfac ugu leeyahay kuweena wax barta ☺
Ku jawaab Nah
Waxaan rabaa inaan u hanbalyeeyo qofka / qofka noo ogolaada inaan sida ugu fudud oo fudud wax ugu sheegno. Waxaan aad ugu boorinayaa boggan, waa mid waxtar weyn u leh kuweenna wax ka barta kulleejada. WAAD MAHADSAN TAHAY
Hagaag boggu wuu fiicanyahay laakiin waxaa jira waxyaabo been ah laakiin sifiican ayaa loo sharaxay mahadsanid sharaxaada 😘😘😉😉😉
Ku jawaab Luciana Rueda Luna
Ka jawaab celinta Pedro, maraakiibtu waxay u adkeysan karaan heerkulkan iyada oo ay ugu wacan tahay gaashaammada kuleylka
sida caadiga ah ka kooban walxaha dabiiciga ah.
su'aal ii sheeg aber
Ku jawaab kirito
Daniela BB dijo
Tani waa macluumaad aad u wanaagsan ℹ wuxuu caawin karaa kuligeen inteena waxbartay waxaan moodayay inay jiraan 4 lakab oo ay jiraan 5 😂😂😂
Jawaab Daniela BB😂
Waxaan baranayaa dugsiga sare ee furan macluumaadkuna wax badan buu i caawiyey aadna waa loo sharaxay, mahadsanid
Jawaab si aad ugu celiso melendez
Khiyaano aad u badan, waxwalba waa been, saaxiibayaal, nidaam waxbarasho oo dhan oo been abuur ah xitaa looma bixi karo booska, daboolid dhan, baaritaanka Flat Earth iyo soo toos.
Jawaab HECTOR MORENO
kiristaan ​​roberto dijo
fiiri hector moreno waxaan aaminsanahay sayniska laakiin fur su'aalahaaga wixii ka baxsan mala awaalkaaga oo is waydii sababta meerahan loo abuuray nidaamka waxbarashadu wuxuu leeyahay xad laakiin hadaanan haysan waxaan durba ogaanay hadii dhulku siman yahay iyo in kale iyo runta aduunkan Laakiin maaddaama aanaan hadda haysan tiknoolajiyad noocaas ah, kama jawaabi kartid, waxaad leedahay ma awoodno inaan ka tagno dhulka maxaa yeelay waxaad leedahay ma ahan wax la qarinayo, waa runta, maxaa yeelay haddii kale, qofku waxba nama uusan sheegin, wuu yaabay oo wuxuu yiri Hadday dhulku fidsan tahay halkaasna ay ka bilaabantay aragtida ah haddii aan ku noolaano dhul fidsan ama wareegsan oo ay na siinayaan jawaab fudud waa wareegsan tahay maxaa yeelay haddii kale haddii ay fidsan tahay qof walba waxaa soo jiidan doona xoogga dhulka miisaanka ayaa lumaya dhulka maxaa yeelay meelaha qaar waxay noqon laheyd kuleyl qabow habeenkii habeenki iyo isku dheelitirka noocaas ah ayaa xumaan lahaa maxaa yeelay sidaas kuma noolaaneyno taa bedelkeeda haddii dhulku rogrogo oo adduunka oo dhan ku wareegto qabowga kuleylka iyo cidna ma noqon laheynsoo jiitay hal dhibic oo magnetism ah waxaan ahay 13 jir kaliya, waxaan soo jeeday ilaa 4 sano oo sida ugufiican uga jawaabi kara su'aashaada ama aan dhamaanayn: 3: v
Kujawaab masiixi roberto
Uma maleynayo in kun darajo lagu gaaro heerkulka, maaddaama dayaxa ku soo wareega adduunka uu gaaro ku dhowaad + -160 digrii macquul ma ahan, meerkurida oo aad ugu dhow qorraxda heerkulka waxaan u maleynayaa inay ku wareegsan tahay ugu badnaan 600 darajo ugu badnaan 1000, markaa caqli gal maaha…. waa qoraal aan is leeyahay.
Waad salaaman tihiin, aad baad ugu mahadsan tihiin macluumaadka, waan jeclahay bogga, had iyo jeer way iga caawisaa howlaha iskuulka macluumaadkuna waa mid waxtar leh.
Jawaab Edwing Rodríguez
Ka jawaabista Juan. Heerkulku wuxuu kuxiran yahay qorraxdu inay soo baxdo iyo in kale. Inaad ka hadasho hal heer kul waa qaladka aad sameyneyso. Aad ayey u kala duwan tahay haddii shucaaca qoraxda yimaado ama uusan imaan. Tusaale ahaan, dayaxa soo degitaankiisa waxaa lagu sameeyaa iftiinka qoraxda, laakiin qabowgu waa qaboojiyaa.
Jawaab Lisandro Milesi
Waan jeclaaday, xogtu waa fiicantahay ilaa hada, aad baad u mahadsantahay 🙂
Ku jawaab Judith herrera
Waad salaaman tihiin dhamaantiin… !!!
Waxaan kucusub ahay degelkan, aad baad u mahadsantahay.
Waxaan aqrinayay maqaal ku saabsan awoodaha kala duwan ee dhulka waxayna warbixintu u muuqatay mid dhameystiran iyo waliba mid dhab ah.
Jawaab alejandro alvarez
Switzerland waxay dooneysaa inay ka badbaadiso baraf ka diirimaadka cimilada adduunka
Cape Horn, oo ah marinka isbeddelka cimilada